Shirka Kismaayo: Caqabadaha iyo Himilooyinka | Caasimada Online
Home Warar Shirka Kismaayo: Caqabadaha iyo Himilooyinka
Waxaa imaanta ka furmaya Kismaayo shirka Madaxasha Wada Xaajoodka Nooca doorashada Baarlamaanka 2016-ka, balse shirka waxaa ku hareereysan caqabado iyo himilooyin badan.
Shirka waxaa hor-yaalla caqabado sida: Isqabqabsiga nooca doorasho oo Puntlnad iyo Jubbaland ay doonayaan doorasho deegaan iyo gobollada kale oo doonaya in doorashada 2016-ka ay noqoto nidaamka 4.5-ka.
Isqabqabsiga Dowlad Goboleedyada: Madaxweynayaasha Maamul goboleedyada dalka keliya fikir ahaan kuma kala duwana ee xitaa waxaa ku dhex jira khilaaf dhinacyo badan sida: Jubbaland iyo Koofur Galbeed iyo Galmudug iyo Puntland.
Biseyl L’aanta Siyaasadeed: Soomaalida uma bisla siyaasadda “win–win situation” oo ah in kooxaha shiraraya ay meel dhexaad isugu yimaadaan, waxaa hadalkaas daliil u ah khudbadihii laga jeediyay Jimcihii xafladii furitaanka Madaarka Boosaaso, halkaas oo Puntland ay sheegtay in aanay marna ka laaban doonin in Soomaaliya ka dhacdo doorasho deegaan.
Sharciyadda Madasha: Waxaa jiro loolan ku saabsan awoodda natiijada shirka, saameynta dowladda federaalka ah, saameynta maamul goboleedyada, awoodda kooxaha kale ee ku jira sida bulshada rayidka, baarlamaanka iyo cid walba oo shirkaan ku shaqo leh, waxaa intaa dheer guddiga madaxa banana ee doorashooyinka oo ku doodaya in kaalintoodii la wiiqay.
Caqabadaha Maaliyadeed: Natiijada shirka ka soo baxda waxaa ay sidoo kale ku xiran tahay fulinteeda in maaliyad loo helo, in kasta oo lagu ballamay shir Istanbul ka dhici doono bisha Febraayo hadana ma cadda halka doorashada lacag looga keeni doono.
Khilaafka Madaxda Sare:
Shirkan waxaa uu ku soo aadayaa xilli uu khilaaf ku kala dhex jiro Madaxweyne Xasan Sheekh iyo guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, Khilaafkaas oo horay u jiray waxaa uu soo shaac baxay markii Jawaari tagay Dhuusamareeb, waxaa kaloo la isku khilaafsan yahay Jiheynta dalka 2016-ka oo baarlamaanka hadda jira uu doonayo in uu saameyn ku yeesho doorashada 2016-ka iyo waqti kororsi, ku lug lahaashiyaha Xildhibaanada ee Maamulka Bakoor sare iyo arrimo kale.
Faragelinta Beesha Caalamka:
Soomaaliya waxaa dhibaato ku haya faragelinta beesha caalamka, dunida waxaa ay taageertaa dhaqaale ahaan dowladdan tabarta daran ee Soomaaliya ka jirta, taasi badalkeeda waxaa ay faragelin dhan walbo ah ku heysaa hey’adaha dowliga ah ee dalka, waxaa su’aal weyn ka taagan tahay Madax banaanida hey’adaha dowladda iyo xitaa guud ahaan siyaasadda dalka.
Shacabka Soomaaliyeed waxaa shacab ka daalay dagaalo iyo khilaaf siyaasadeed, waxaa ay ku raalli noqdeen natiijo kasta, laga soo bilaabo shirkii Soodare ee Adis Ababa 25, June 1997-dii, shirkaanina kama duwana.
Natiijada shirka waxaa isha ku haya dhamaan umadda, shacabka waxaa ay horay ugu dulqaateen balantii looga baxay ee aheyd in 2016-ka dalka ka dhici doonto“ doorasho qof iyo codkii ah”, lakin waxaa nasiib darro noqon doonta marka uu shirkan guuldareysto.
Arrinta ku saabsan nooca doorasho ee 2016-ka waa dhibaato ku gaar ah Laacibiinta siyaasadda ee dalka, Shacabka waxaa ay cod ku lahaayeen haddii dalka ka dhici laheyd doorasho qof iyo codkii ah”, sidaa darteed waxaa haboon in mar kale aan umadda la niyadda jabin.
Shacabka waxaa ay quus ka joogaan in aayahooda mar walbo ay ka tashtaan dad aanay u soo dooran in ay matalaan, Lakin shirka Kismaayo hadii uu khilaaf ka dhasho, isla markaana lagu kala tago iyagoo mar kale shacabka lagu marmarsiyoonaya waa arrin ka hor imaaneysa Himilooyinka shacabka Soomaaliyeed.
Soomaaliya waxaa waqti badan ka lumisay Hiigsiga 2016-ka, waxaa la gaaray xiligii dowladda federaalka iyo dowladaha kale u soo jeesan lahaayeen dib u dhiska dalka, nabadda iyo dhamaan hor-umarinta dadka iyo dalka.
Rajada shacabka ay shirkan ka qabaan waa in doorashada waqtigeeda la qabto, laguna heshiiyo qaabka, dadka wax xulaya iyo natiijada sida ay noqon doonto.
Sooyaalka Shirarka Madasha wadatashiga ee doorashada 2016-ka:
October 19-keedii ilaa 20-keedii waxaa ka soconayey Muqdisho shirarka Madasha, kaasi oo la doonayay in loogu gogol xaaro habkii lagu gaari lahaa inay doorashooyin ka dhacaan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 2016-ka.
Gunaanadkii waxaa lagu sameeyay:
Shirkan waxaa inta badan lagu raadinayey Jawaabaha Yaa Xulaya ergada ama Wakiilo Doorasho ama yaa Xulaya eragada doorshada, side loo xaqiijinayaa xulista Baarlamaan si dheelitiran u matala deegaan, side geedi u soconda hanaanka 4.5 u noqon karaa marjica awood qeybi? Side dowlad goboleedka looga qeyb galin karaa hanaanka, Maxuuse noqon karaa kaalinta Odey dhaqameedka.
December 08, 2015: Shirkii todobaad ee madasha wada-tashiga Somalia iyo dalalka iyo hay’adaha caawiya Somalia ee HPLF ayaa lagu soo Gunaanaday Muqdisho.
Kulanka ayaa waxaa ka qayb-galay Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha, Guddoomiyaha Baarlamaanka, Hoggaamiyeyaasha Jubbaland, Puntland, Koonfur-galbeed iyo Galmudug, wakiillo ka kala socday gobollada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan, mas’uuliyiin ka socday Beesha Caalamka, Qaramada Midoobay, Midowga Afrika iyo Midowga Yurub.
December 13, 2015: Waxaa Muqdisho ka furmay shir logu go’aansanayo qaabka ay u dhaceyso doorashada 2016-ka, Ugu dambeyn shirka ayaa laga rabaa in go’aan kama dambeys uu ka soo baxo nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici doona sanadka 2016, waxaana laga yaabaa hadii maalinta berri go’aano ka soo bixi waayaan, in maalin saddexaad loo gudbo, iyadoo qorshuhu yahay ka hor shirka ka dhacaya Istanbul bisha Febraayo sanadka 2016 go’aan kama dambeys la gaaro
December 15, 2015: Waxaa Muqdisho Lagu soo Gabagabeeyay Shir Madaasha Wada Xaajoodka Nooca doorashada Baarlamaanka 2016-ka.
January 11, 2016: Waxaa Kismaayo ka dhacaya shirka Madasha Wada Xaajoodka Nooca doorashada Baarlamaanka 2016-ka, waxaa la filayaa in shirkaas gabagabadiisa lagu ogoodo nooca doorasho ee dalka ka dhaceysa 2016-ka.
Cabdi Caziz Axmed Gurbiye